Hotwav W10: maitiro, kutanga uye mutengo - TecnoBreak | Zvipo uye Ongororo
kudzidziswaSmart mafoniHotwav W10: maitiro, kutanga uye mutengo
wedzera wongororo yako
JeoPoom Universal Nharembozha Lanyard, Inogadziriswa Neck Strap Lanyard, Inoenderana neMazhinji Smartphones(Pingi)
Tenga izvozvi +
Samsung Galaxy A22 5G - Yemahara Smartphone ine 6.6 Inch 128GB uye Violet Android Inoshanda System ES Shanduro
3G Nharembozha neMafoni, 5,0 Inch, Android OS, 4GB ROM / 32GB Extendable, Dual Card Dual Camera Phone, Support GPS, WiFi, Bluetooth. (8Pro-Green)
Samsung Galaxy M12 Smartphone ine 6,5-Inch Infinity-V TFT LCD Screen, 4 GB ye RAM uye 128 GB yeInternal Memory Inowedzera, 5000 mAh Bhatiri uye Fast Charge Green (ES Version)
Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone 6.43 ″ FHD + DotDisplay, 90Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, 50MP Al Quad Kamera, 5000mAh (typ) bhatiri, Dual-SIM 4G 128GB Twilight Blue [Global Version]
Kutevera kutangwa kweiyo inodhura zvakanyanya smartphone T5 Pro, Hotwav iri kugadzirira chimwe chigadziri chakaoma. Kufanana neT5 Pro, iyo iri kuuya Hotwav W10 inotarisana nemusika unodhura we smartphone ine chitupa chayo.
Iyo Hotwav W10 itsva yakasimba uye yakachipa smartphone ine 4G yekubatanidza. Iyi modhi yatove kutengeswa paAliexpress. Ndapota cherechedza kuti mutengo wakaratidzwa hausi iwo chaiwo mutengo. Chishandiso ichi chichave chiripo kubva munaChikumi 27, nemutengo unenge uri pa95 euros kana 99USD.
Hotwav W10 wongororo
Tichitaura nezvekuzivikanwa, iyo Hotwav W10 ichange ichishandiswa nebhatiri re15.000mAh, yekutanga yerudzi rwayo kubva kukambani. Pamusoro pezvo, foni ichapa Google yazvino Android 12 mubhokisi.
Mamiriro ehunyanzvi eiyo Hotwav W10
Mavara anowanikwa: dema
Inoshanda system: Android 12
CPU: Quad musimboti 2GHz Cortex-A53
Kukura: 6,53 inches
Sarudzo: 720 x 1600 px
RAM ndangariro: 4 GB
Yemukati yekuchengetedza: 32 GB
Chekuchengetedza kunze: microSD
Mberi kamera: 5 MP
Kamera yekumashure: 13 MP
FM redhiyo: Kwete
Bhatiri: Li-Ion 15.000 mAh
Iyo Hotwav W10 inofanirwa kunge iri yakachipa yakarukwa smartphone ine dhizaini inosanganisa zvinhu zvepamusoro-tekinoroji zvine mavara akareruka asi emhando yepamusoro (orenji nedema). Iyo smartphone inofanirwa kukwanisa kumira zvakaomarara mamiriro ekunze uye kusangana neIP68, IP69K, uye MIL-STD810G zviyero.
Hotwav W10 ine 6,53-inch skrini ine resolution ye720 x 1440 pixels, inokwanisa kusvika 450 nits yekupenya, uye 269PPI. Chidzitiro i IPS panel uye ine notch muchimiro chedonhwe remvura pakati. Iine zviyero zve 168,8 x 82,5 x 15 mm, uye huremu hwe279 gramu. Iyo ine premium rubber kumashure.
Iyo Hotwav W10 ine Mediatek MT6761 Helio A22 (12nm) chip inotsigira GSM / HSPA / LTE network modes, ine quad-core Cortex-A53 processor yakavharwa pa2,0Ghz. Kana iri mifananidzo, ine PowerVR GE8320. Iyo yakapetwa ne4GB ye RAM pamwe ne32GB yekuchengetedza mukati.
Iyo ndangariro inogona kuwedzerwa uchishandisa memori kadhi uye kushanda mune mbiri mbiri SIM modhi zvakare inogoneka.
Mukuwedzera, iyo smartphone inoshandisa 5 MP kumberi kamera, kune selfies uye vhidhiyo mafoni. Kamera yayo huru ndeye 13MP f/1.8 yakafara angle uye 0.3MP QVGA f/2.4 yakadzika kamera. Pamusoro peiyo yakanakisa dhizaini yekunze, foni zvakare ine inopokana uye yakasimba IP68/69K muviri uye hombe 15000mAh bhatiri ine 18W inokurumidza kuchaja.
Izvi zvinopa chiitiko chisina kumboitika kune vashandisi, kungave kutamba mitambo, kuona mavhidhiyo kana pazviitiko zvekunze. Mukuwedzera, iyo 18W yekukurumidza kuchaja system inobvumira kuzara kwakazara munguva pfupi yenguva.
Pamusoro pezvo, ichine 3,5mm jack port, padivi-yakaiswa zvigunwe zvigunwe sensor, uye akajairwa masensa senge accelerometer, kuswedera, uye kambasi. Iyo haina NFC asi ine Bluetooth 5.0 uye A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot uye kuchaja kuburikidza ne USB Type-C port.
El Hotwav W10 ndiyo itsva yakaonda smartphone kubva mumhando iyo vashandisi vanozoda nemutengo unokwikwidza senge 95 euros kana 99 madhora, uku ichipa yakakwirira-kuita zvakatemwa. Iyi smartphone ichatengeswa munaJune 27 pano paAliexpress.
Chii chinonzi Hotwav?
Yakatangwa muShenzhen muna 2008. hotwav ikambani yepasi rose yakazvipira kupa nharembozha dzinofarirwa uye masevhisi kune vatengi veko mumisika ichiri kusimukira. Mushure memakore gumi ekuwedzera, kambani yave bhizinesi repamusoro-soro uye yakawana rutsigiro rwenguva refu uye kuvimba kubva kune vatengi.
Kubva kuR&D, dhizaini uye kugadzira kusvika kutengesa uye mushure-yekutengesa sevhisi, Hotwav inokwanisa kudzora yako yese maindasitiri ecosystem. Panguva imwecheteyo, ita kuongorora kwakadzama uye maitiro anobatsira muminda yehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji, kwete chete kugadzira chikwata chepamusoro-soro uye chepamusoro-soro chekusimudzira, asiwo nekutanga nzvimbo yepasi rose yekutsvaga nekusimudzira.
Iyo kambani inoedza kutora migove mikuru yemusika uye yakasimbisa kusimudzira bhizinesi remhando dzakazvimirira uye zvakare yakagadziridza iyo OEM system kuti ipe nekukurumidza uye zvirinani sevhisi kune vatengi pasirese. Iye zvino musika wekambani unovhara Dubai, Russia, Indonesia, Mexico, Colombia nedzimwe nzvimbo dzepasi.
0.0 kubva ku5
Iko hakuna wongororo parizvino.
Iva wekutanga kuongorora "Hotwav W10: maitiro, kutanga uye mutengo" Misa mhinduro
rating yako Kodzera… Perfecto Bueno Avhareji Hazvina kushata kudaro Akanyanya hurombo
wongororo yako *